Mini Mart Location – Denko Myanmar
Smile Fleet Card
DENKO Fuel Rates
Mini Mart Location
DENKO Mini Mart ဆိုင်သည် DENKO ဆီဆိုင်အတွင်း ဆီဖြည့်သူများနှင့် ခရီးသွား မိဘညီကိုမောင်နှမများ လိုအပ်သည့် အစားအသောက် လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရာမှာ အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန် အတွက် ဖွင့်လှစ်ထားသော ဆိုင်များဖြစ်ပါသည်။
DENKO Mini Mart ဆိုင်များဖွင့်လှစ်ထားသော DENKO ဆီဆိုင်လိပ်စာများအား အောက်တွင်ဖော်ပြ ပေးထားပါသည်။ DENKO ဆီဆိုင်တိုင်းမှာ Mini Mart ဆိုင်များ ဆက်လက်တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်သွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။
Township Please Choose Township
1 ကုန်းတလပေါင် အမှတ်(၃) လမ်းမကြီး၊ ကုန်းတလပေါင် ကျေးရွာ၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ မင်္ဂလာဒုံ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
2 ကျပ်ပြင် (မိုးကုတ်) DENKO ဆီဆိုင် အမှတ် (၁၀/၂၃)၊ မန္တလေး - မိုးကုတ် - မြစ်ကြီးနားလမ်းမကြီး၊ ကသဲကျေးရွာအုပ်စု၊ ခြင်္သေ့ရေရပ်ကွက်၊ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ မိုးကုတ်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။ မိုးကုတ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
3 ကျိုက်ထို ဆိုင်အမှတ်(၀၁၅၆)၊ တောင်သူစုရပ်ကွက်၊ သထုံခရိုင်၊ ကျိုက်ထိုမြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်။ ကျိုက်ထို မွန်ပြည်နယ်
4 ကျောက်ဆည် အမှတ် (၂၈/၄)၊ ပြည်ပန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်း (လမ်းဟောင်း)၊ ကျောက်ဆည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။ ကျောက်ဆည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
5 ကျောက်ပန်းတောင်း အမှတ် ရ/၁၊ ကျောက်ပန်းတောင်း-မိထ္ထီလာ ကားလမ်းမကြီးဘေး၊ သီရိမင်္ဂလာရပ်ကွက်၊ လယ်ယာတောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ညောင်ဦးခရိုင်၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။ ကျောက်ပန်းတောင်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
6 ကျောက်မဲ မန္တလေး-လားရှိုးလမ်းမကြီး၊ ခိုမုန်းရွာ၊ ကျွဲကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျောက်မဲမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်။ ကျောက်မဲ ရှမ်းပြည်နယ်
7 ကျွဲတပ်ဆုံ (သာစည်) မိတ္ထီလာ-တောင်ကြီးလမ်း ၊ ကျွဲတပ်ဆုံတိုးဂိတ်အနီး ၊ သာစည်မြို့နယ် ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။ သာစည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
8 ချောက် DENKO ဆီဆိုင် (၁၅) နယ်မြေတိုးချဲ့ ရပ်ကွက်၊ လမ်းမတော်လမ်းမကြီး၊ ချောက်မြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး။ ချောက်မြို့ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
9 စစ်ကိုင်း (အုန်းတောလမ်းခွဲအနီး) ဇရပ်ကုန်းရွာ (အုန်းတောလမ်းခွဲအနီး)၊ စစ်ကိုင်း-ရွှေဘို-မုံရွာလမ်းမကြီး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး။ စစ်ကိုင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
10 စဉ့်ကိုင် ရန်ကုန်- မန္တလေး လမ်းဟောင်း၊ ညောင်ပင်ကျေးရွာ အုပ်စု၊ စဉ့်ကိုင်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။ အမရပူရ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
11 ညောင်ဦး - ၁ ကျောက်ပန်းတောင်း-ညောင်ဦးလမ်းမဘေး၊ ကျောက်စစ်ကန်ကွင်း၊ တောင်ဘကျေးရွာအုပ်စု၊ ညောင်ဦးမြို့နယ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။ ညောင်ဦး မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
12 တပ်ကုန်း အမှတ် (၆/ရာဇာဓိရာဇ်) ၊ ဗိုလ်မင်းရောင်ရပ်ကွက်၊ နယ်မြေ (၁၂) ရန်ကုန်- မန္တလေးလမ်းဟောင်း၊ တပ်ကုန်းမြို့နယ်၊ ဥတ္တရခရိုင်၊ နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ။ တပ်ကုန်း နေပြည်တော်
13 တောင်ကြီး (ကံကြီး) အမှတ်(၁၁/၁၈၃)၊ တောင်ကြီး - ကျောက်တလုံးကားလမ်း၊ ဘောလုံးကွင်းရပ်၊ ကံကြီးရပ်ကွက်၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်။ တောင်ကြီး ရှမ်းပြည်နယ်
14 တောင်ငူ အမှတ် ( ၁၈ )၊ ရန်ကုန်-မန္တလေး လမ်း(ဟောင်း)၊ အင်ဒိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တောင်ငူမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။ တောင်ငူ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
15 တောင်ဒဂုံ DENKO ဆီဆိုင် အမှတ် ၁ (က-B)၊ ၁၄၂ ရက်ကွက်၊ အမှတ် ၂ လမ်းမကြီးနှင့် ကျန်စစ်သားလမ်းထောင့် တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ တောင်ဒဂုံ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
16 တံတားဦး အမှတ် (၃) နယ်မြေ၊ လွှစင်တန်းရပ်ကွက်၊ တံတားဦး-မြို့သာကားလမ်း၊ ချမ်းသာကြီးဘုရားအနောက်ဘက်၊ တံတားဦးမြို့နယ်၊ ကျောက်ဆည်ခရိုင်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။ တံတားဦး မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
17 ထန်းတပင် အမှတ်(၈/၄)၊ အမှတ် (၅)လမ်းမကြီး (ရန်ကုန်- ပုသိမ်ကားလမ်းမကြီး)၊ အစုကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ရန်ကုန် မြောက်ပိုင်းခရိုင်၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ ထန်းတပင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
18 ဓနုဖြူ အမှတ်- (၁၁-၂၈) ဓနုဖြူ - ဇလွန်ကားလမ်းမကြီးဘေး၊ အုန်းပင်ကွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ဓနုဖြူ မြို့နယ်၊ မအူပင်ခရိုင်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး။ ဓနုဖြူ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
19 နန်းဦးလွင်(၂၆ လမ်းထိပ်) DENKO ဆီဆိုင် အမှတ် (၄၆/၄၇)၊ မြို့ပတ်လမ်းနှင့် ၂၆ လမ်းထောင့်၊ မန္တလေး - ပြင်ဦးလွင်လမ်း၊ နန်းဦးလွင်ကျေးရွာ၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။ ပုသိမ်ကြီး မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
20 နမ့်စန် DENKO ဆီဆိုင် တောင်ကြီး-လွိုင်လင်- နမ့်စန် ပြည်ထောင်စုလမ်းမပေါ်၊ အမှတ်(၁/ခ)၊ မီးသွေးကုန်းကျေးရွာ၊ ဝမ်ပုံကျေးရွာအုပ်စု၊ နမ့်စန်မြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း။ နမ့်စန် ရှမ်းပြည်နယ်
21 ပင်းတယ Denko ဆီဆိုင် အောင်ပန်း-ရပ်စောက် လမ်းးမကြီးပေါ်၊ အမှတ်(၇၆၈)၊ ရွာသစ်ရပ်ကွက်၊ ပုန်းတလုတ်ကန်ဒေါင့်၊ ပင်းတယမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်။ ပင်းတယ ရှမ်းပြည်နယ်
22 ပလိပ် အမှတ်(၄၂/၂၀၀) ၊ရန်ကုန်-မန္တလေး ဟိုင်းဝေးလမ်း ၊စည်းဆုံရွာ ၊ စဉ့်ကိုင်မြို့နယ် ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။ စဉ့်ကိုင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
23 ပုသိမ် - ၁ (ကမ်းနီ) DENKO ဆီဆိုင် အမှတ် (27/57) ပုသိမ်-ငွေဆောင်လမ်း၊ ကမ်းနီကျေးရွာအုပ်စု၊ ပုသိမ်မြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး။ ပုသိမ် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
24 ပေါင် အမှတ် (၅၇/ခ)၊ ရန်ကုန် - မော်လမြိုင် အမြန်ကားလမ်းမကြီး၊ ကဒုံစီးရပ်ကွက်၊ ပေါင်မြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်။ ပေါင် မွန်ပြည်နယ်
25 ပြွန်တန်ဆာ အမှတ် (၁၀/၂)၊ မြို့မ ၁ ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေး လမ်းဟောင်း၊ ပြွန်တန်ဆာမြို့ ၊ ညောင်လေးပင်မြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ။ ညောင်လေးပင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
26 ဖြူး (အမြန်လမ်း၁၁၅မိုင်) (၁၁၅) မိုင်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီးဘေး၊ ဖြူးမြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။ ဖြူး ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
27 ဗန်းမော် - ၁ DENKO ဆီဆိုင် ဆိုင်အမှတ် (၀၆၇၅)၊ (၂)မိုင်၊ သာစည်ရပ်၊ ဗန်းမော်- မြစ်ကြီးနားလမ်းဘေး ဗန်းမော်မြို့ ကချင်ပြည်နယ်။ ဗန်းမော် ကချင်ပြည်နယ်
28 ဗန်းမော် - ၂ DENKO ဆီဆိုင် အမှတ်(၉)၊ ဗန်းမော်-မန္တလေးကားလမ်းမကြီး၊ ဖန်ခါးကုန်းရပ်ကွက်၊ ဟန်တဲကျေးရွာအုပ်စု၊ ဗန်းမော်မြို့၊ ကချင်ပြည်နယ်။ ဗန်းမော် ကချင်ပြည်နယ်
29 ဗဟန်း အမှတ်(၅)၊ ဦးဝိစာရလမ်းနှင့် အနောက်ရွှေဂုံတိုင်လမ်းထောင့်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ ဗဟန်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
30 ဘားအံ - ၁ အမှတ် ၉ ရပ်ကွက်၊ မြဝတီ-ဘားအံ လမ်းမကြီး၊ လှိုင်းဘွဲ့လမ်းဆုံအနီး၊ ရေကျော်ကျေးရွာ၊ ဘားအံမြို့နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်။ ဘားအံ ကရင်ပြည်နယ်
31 ဘားအံ -၂ အမှတ် (၁၃၁ /၂)၊ ဘားအံ-ထုံးအိုင်လမ်း၊ အမှတ် ၈ ရပ်ကွက်၊ ဘားအံမြို့၊ ကရင်ပြည်နယ်။ ဘားအံ ကရင်ပြည်နယ်
32 ဘီးလင်း ရန်ကုန်-မော်လမြိုင် အဝေးပြေးလမ်းမကြီး၊ ဘိုးလှကြီး ရပ်ကွက်၊ ဘီးလင်းမြို့နယ်၊၊ မွန်ပြည်နယ်။ ဘီးလင်း မွန်ပြည်နယ်
33 ဘုတလင် အမှတ်(၂၆၃/က) မြဝတီကျေးရွာအုပ်စု၊ မုံရွာ-ဘုတလင်-ရေဦး လမ်း၊ မုံရွာခရိုင်၊ ဘုတလင်မြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဘုတလင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
34 ဘုရားကြီး ရပ်(၃)၊ ရှမ်းစုရပ်ကွက်၊ ဘုရားကြီးကျေးရွာ အုပ်စု၊ ပဲခူးခရိုင်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။ ပဲခူး ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
35 မန္တလေး (၆၂)လမ်းနှင့် သိပ္ပံလမ်းထောင့် မန္တလေးမြို့၊ ၆၂ လမ်းနှင့် သိပ္ပံလမ်းထောင့်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။ ချမ်းမြသာစည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
36 မန္တလေး (၇၄)လမ်း အမှတ် (၅-က)၊ ရ၃ x ရ၄ ကြား၊ တံခွန်တိုင်အဝိုင်းအနီး၊ တောင်မြင့်ရပ်ကွက်၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။ ပြည်ကြီးတံခွန် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
37 မန္တလေး (၇၈)လမ်း ခင်စောမူကွေ့ မန္တလေးမြို့ (၇၈) လမ်း၊ ခင်စောမူကွေ့၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။ မဟာအောင်မြေ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
38 မန္တလေး စွယ်တော် (ကားကြီးဝင်း) နတ်ရေကန် ရပ်ကွက်၊ မန္တလေးခရိုင်၊ အမရပူရမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။ အမရပူရ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
39 မန္တလေး ရှမ်းကလေးကျွန်း အမှတ်(၁ /၅)၊ စစ်ကိုင်း-မန္တလေးလမ်း ကန်တော်ကြီးထောင့်၊ ရှမ်းကလေးကျွန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ အမရပူရမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။ အမရပူရ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
40 မန္တလေး အမရပူရ (ပန်းချီ) အမှတ် (၆၁၃) မန္တလေး-စစ်ကိုင်းလမ်းဟောင်း၊ ရွှေကြက်ယက်တိုးဂိတ်အနီး၊ ပန်းချီကျေးရွာအုပ်စု၊ အမရပူရမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။ အမရပူရ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
41 မန္တလေး ၆၇ လမ်း (ထုံးဘို) အမှတ်(580/K)၊ (၆၇) လမ်း၊ ထုံးဘို-မြစ်ငယ်လမ်း၊ အမရပူရမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။ အမရပူရ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
42 မန္တလေး(ကျောက်စိမ်းဘုရားအနီး) ဆင်ရွာမြင်းမှူးကျေးရွာ၊ အမရပူရမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။ အမရပူရ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
43 မအူပင် DENKO ဆီဆိုင် မအူပင် - အမှတ် ( ၁၆-စ/၁၇-ဃ )၊ ရန်ကုန်-မအူပင်လမ်း၊ အမှတ် ၂ ရပ်ကွက်၊ မအူပင်ခရိုင် ၊ မအူပင်မြို့ ၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး။ မအူပင် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
44 မအူပင် DENKO ဆီဆိုင် မအူပင် - အမှတ် ( ၁၆-စ/၁၇-ဃ )၊ ရန်ကုန်-မအူပင်လမ်း၊ အမှတ် ၂ ရပ်ကွက်၊ မအူပင်ခရိုင် ၊ မအူပင်မြို့ ၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး။ မအူပင် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
45 မိတ္ထီလာ မိတ္ထီလာ-တောင်ကြီးကားလမ်းဘေး၊ ထမုန်ကုန်အုပ်စု၊ ထမုန်ကန်ကျေးရွာ၊ မိတ္ထီလာမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။ မိတ္ထီလာ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
46 မိတ္ထီလာ - ၂ DENKO ဆီဆိုင် အမှတ် (၁၉၆/၁၉၇)၊ မိတ္ထီလာ-ရန်ကုန် မြို့ရှောင်လမ်းနှင့် ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းဟောင်းထောင့်၊ ကန်တောင်ကျေးရွာ၊ မိတ္ထီလာမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။ မိတ္ထီလာ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
47 မုတ္တမ ဆိုင်အမှတ်(၀၈၆၇)၊ ရန်ကုန်-ထားဝယ် လမ်းမကြီးဘေး၊ ကော့စိုင်ရွာကွင်း၊ မုတ္တမကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေါင်မြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်။ ပေါင် မွန်ပြည်နယ်
48 မုံရွာ (၁) မုံရွာ - ရေဦးလမ်း အောင်မင်္ဂလာ အဝိုင်းအနီး၊ အိုးဘိုတောင်ရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး။ မုံရွာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
49 မုံရွာ - ၂ (ကမ်းနား) အမှတ် (၆၆/၁၄၉)၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ရုံးကြီးရပ်၊ သလ္လာဝတီဆိပ်ကမ်း၊ မုံရွာမြို့၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး။ မုံရွာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
50 မုံရွာ - ၃ အမှတ်(၁၄-၁၆)၊ မုံရွာ-မန္တလေး ကားလမ်းမကြီး၊ မအူကျေးရွာအုပ်စု၊ မုံရွာမြို့နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး။ မုံရွာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
51 မော်လမြိုင် ဆိုင်အမှတ်(၀၈၀၂)၊ စစ်ကဲကုန်းရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်မြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်။ မော်လမြိုင် မွန်ပြည်နယ်
52 မြင်းခြံ အမှတ် (၅၄-၅၅)၊ ချောင်းဒေါင်း (၂၀)ရပ်ကွက်၊ မြင်းခြံ-မန္တလေး လမ်းမကြီး၊ မြင်းခြံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။ မြင်းခြံ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
53 မြောက်ဒဂုံ - ၁ အမှတ် (၅၄၂ / ၅၄၃)၊ ဗိုလ်မှူးဗထူးလမ်း၊ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)ဘေး၊ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း) မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ မြောက်ဒဂုံ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
54 မြောက်ဒဂုံ -၂ အမှတ် (၃/စ) ၊ ပြည်ထောင်စုလမ်း၊ ၂၇ ရပ်ကွက်၊ တောင်/မြောက်လမ်းဆုံအနီး၊ ဒဂုံမြို့သစ် (မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ မြောက်ဒဂုံ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
55 မြောက်ဥက္ကလာပ အမှတ် (၁၆/H)၊ ခေမာသီလမ်း၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ မြောက်ဥက္ကလာပ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
56 ရပ်စောက် DENKO ဆီဆိုင် ရပ်စောက်-ရွှေညောင် လမ်းမပေါ်၊ အမှတ်(၇၆၇)၊ ရပ်စောက်-ရွှေညောင် လမ်းမပေါ်၊ မြို့ဦးရပ်ကွက်၊ ရပ်စောက်မြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း။ ရပ်စောက် ရှမ်းပြည်နယ်
57 ရွှေညောင် အမှတ် (၂၉/၁)၊ မြို့မ (၁) မင်္ဂလာရွှေဗဟိုရ်ရပ်၊ ရွှေညောင်-ညောင်ရွှေ လမ်းမကြီး၊ရွှေညောင်မြို့၊ တောင်ကြီးမြို့နယ် ၊ ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း။ ရွှေညောင် ရှမ်းပြည်နယ်
58 ရွှေပြည်သာ အမှတ် (၄၂/၃၀၅)၊ အမှတ် ၄ လမ်းမကြီး၊ စက်မှုဇုန် (၁)၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ ရွှေပြည်သာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
59 ရွှေဘို သူဇာရပ်ကွက်၊ ကျောက်မြောင်းလမ်း၊ ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးဌာနခွဲ၊ ရွေဘိုမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး။ ရွှေဘို စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
60 လက်ပံလှ (စဉ့်ကူး) အမှတ် (၇၃၀/၁၅၂၂)၊ မန ္တလေး - မြစ်ကြီးနားလမ်း၊ လက်ပံလှကျေးရွာ ၊ နတ်တောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။ စဉ့်ကူး မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
61 လားရှိုး (နမ့်ခိုက်) မန္တလေး - မူဆယ် ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးဘေး၊ ၁ ရပ်ကွက်၊ နယ်မြေ ၉၊ နမ့်ခိုက် တိုးချဲ့ရပ်ကွက်၊ လားရှိုးမြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်။ လားရှိုး ရှမ်းပြည်နယ်
62 လွိုင်ကော် အမှတ် N- ၈၃ (ခ)၊ နွားလဝိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ လွိုင်ကော်-ဆီဆိုင်လမ်း ၊ နွားလဝိုးစျေးအနီး လွိုင်ကော်မြို့၊ ကယားပြည်နယ်။ လွိုင်ကော် ကယားပြည်နယ်
63 လှည်းကူး ရန်ကုန် - ပဲခူးကားလမ်းမကြီး၊ ကျွန်းကလေးကျေးရွာ၊ တန်(၁၀၀) ဆန်စက်ဝန်း အတွင်း၊ လှည်းကူးမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ လှည်းကူး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
64 လှိုင်သာယာ - ၁ ရန်ကုန်-ပုသိမ် ကားလမ်းမကြီးဘေး၊ အမှတ်(၅၈၈)၊ (၇) ရပ်ကွက်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ လှိုင်သာယာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
65 လှိုင်သာယာ - ၂ DENKO ဆီဆိုင် အမှတ် (၁၅၁) ဇုံ-၅၊ အနော်ရထာလမ်းမကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ လှိုင်သာယာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
66 လှိုင်သာယာ - ၃ အမှတ် (၃/၄၉) အလယ်ရွာကျေးရွာအုပ်စု၊ ခရေပင်လမ်းမကြီး ၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ် ၊ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ လှိုင်သာယာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
67 ဝမ်းတွင်း ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းမကြီးဘေး၊ အမှတ်(၂) ရပ်ကွက်၊ ၀မ်းတွင်းမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။ ဝမ်းတွင်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
68 ဝေါ ဝေါဘိုးဘိန်းကွင်းရပ်၊ အေးချမ်းသာယာရပ်ကွက် ၊ ဝေါမြို့နယ် ၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။ ဝေါ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
69 သထုံ အမှတ် (၁၈) အောက်ကျင်းရပ်ကွက်၊ သထုံမြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်။ သထုံ မွန်ပြည်နယ်
70 သာမည အမှတ်(N- ၂၄)၊ ကော့ကဒါကျေးရွာအုပ်စု၊ ဘားအံ-ကော့ကရိတ်-မြဝတီလမ်းမကြီး၊ ဘားအံမြို့၊ ကရင်ပြည်နယ်။ ဘားအံ ကရင်ပြည်နယ်
71 သိမ်ဆိပ် အမှတ် ၁၃၅-၁၃၆၊ သိမ်ဆိပ်အရှေ့ကွင်း၊ သုဝဏဝတီမြို့၊ သထုံမြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်။ သထုံ မွန်ပြည်နယ်
72 ဟင်္သာတ - Denko ဆီဆိုင် ဦးပိုင်အမှတ် (၂၂၀/၂) ဟသာင်္တ-ဇလွန် ကားလမ်း၊ အင်းဓဝယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဟင်္သာတမြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး။ ဟင်္သာတ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
73 အင်းစိန် ရန်ကုန်-အင်းစိန်လမ်းမကြီး၊ BOC ကွေ့၊ နံ့သာကုန်း ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ အင်းစိန် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
74 အမြန်လမ်း ဆေးအိုးဖိုအဝိုင်း (မန္တလေး) အမှတ် ၁၄/၁ ၊ ရန်ကုန် - မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီးဘေး ဆေးအိုဖို အဝိုင်းအနီး ဆေးအိုးဖိုကျေးရွာ အမရပူရမြို့ နယ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အမရပူရ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
75 အောင်ဆန်း အောက်မင်္ဂလာဒုံ လမ််းမကြီး၊ စဉ့်ငူရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ အင်းစိန် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
76 အောင်ပန်း ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီး (တောင်ကြီး-မိတ္ထီလာ)ဂေါ်ရခါးရွာအနောက်ကွင်း၊ လွယ်အံကျေးရွာအုပ်စု၊ ကလောမြို့နယ်၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်။ ကလော ရှမ်းပြည်နယ်
Mini Mart Locations
Copyright © 2022. Denko All rights reserved.
Denko Stations Mini Marts ATM Locations FAQs